Iziphuzo Soft eyokusiza ngithi goodbye kuya isisindo okweqile
Noma ubani oke waba wazama ukudla uyazi nokuthi kunzima kangakanani uya isisindo esengeziwe. Namuhla sizokutshela ophuze esikhathini esifishane uzokusindisa kusukela amakhilogremu ecasulayo.
100 g abakhwabanisi pre-wageza kufanele uthele 2 amalitha amanzi bese kwesokunxele ngeviki. Ngaphambi ukusetshenziswa, ubunzima. I ukumnika Kunconywa ukuba baphuze ingilazi eyodwa sokuzila ukudla.
Plums ingakusiza ukususa ubuthi emzimbeni, ngaleyo ndlela kuyashesha kwesisindo. Kodwa ungaphuzi ezingaphezu kweyodwa inkomishi ngosuku, ngakho njengoba plums kukhona laxative enamandla.
Phuza uju kanye nesinamoni
Hlanganisa ingilazi yamanzi kanye isipuni uju kanye art nengxenye. nesinamoni. Phuza ekuseni esiswini esingenalutho.
Cinnamon kusiza ekwehliseni amazinga kashukela, izinsiza ukugaya futhi kuthuthukisa umzimba. Ososayensi bathi esikhundleni ushukela uju kungavimbela isisindo somzimba.
Ukumnika kakolweni lwegciwane
Ilitha imbiza kufanele ugcwalise ingxenye yesine ka kakolweni lwegciwane, bese sigcwale amanzi kuze kube phezulu. Imibungu kufanele sokunika izinsuku 2, bese nzima ukumnika kuyadingeka. Phuza 150 ml ngaphambi kokudla.
Isiphuzo kumele kube kancane esinamafu futhi abe ukukhanya ezisawolintshi ukunambitheka. Ithuthukisa umzimba, kusiza ukugaya yakho futhi kususa ubuthi.
Ngo ingilazi yamanzi, engeza umpe lukalamula kanye nengxenye yezikhulu oqoshiwe ginger impande. Phuza ingilazi ekuseni.
Ginger iwumkhiqizo kuhle kwesisindo ngoba kunciphisa ukuvuvukala futhi kusiza ukususa uketshezi okweqile kusukela emzimbeni wakho. Lemon kuyothuthukisa izinso, ukukhuthaza ukususwa ubuthi kanye nemithetho ukugaya
Lungiselela embizeni Ilitha futhi usigcwalisa dandelion izimbali ngaphandle amaqabunga. Thela amanzi abilayo. Khona-ke engeza wezipuni ambalwa uju bese ushiye 4 amahora ku esiqandisini. Ngaphambi ukusetshenziswa, ubunzima.
Lokhu isiphuzo kungase kuthathelwe indawo i itiye abavamile. Okuhle kunakho konke ukuthi izosebenza, uma uya ku-yidla ukudla okunempilo. itiye Dandelion ngokushesha isusa izinto eziyingozi ezivela umzimba. Kufanele uqaphele, ngoba isisu oqinile.
uphayinaphu ezivuthiwe kufanele ehlutshiwe bese ngawakhamela out ijusi. It kungenziwa buhlanjululwe ngamanzi kanye isiphuzo njengoba kudingeka.
Uphayinaphu juice kusiza ukususa amanzi angadingeki emzimbeni. Umbhali wayevame ukunezela lokhu imbangela ukukhuluphala kuyisimo uketshezi olunqwabelene emzimbeni, hhayi ezikhuluphele.
Ukulungisa amanzi, kufanele uhlanganise 2 amalitha amanzi okumsulwa kanye umpe eyodwa lemon, engeza ikhukhamba oqoshiwe, tincetu ginger impande kanye namahlamvu peppermint. Shiya esiqandisini amahora 15. Ukuphuza amanzi anjalo kumele ibe phakathi 4 kuya kwezingu-8 izinsuku inkomishi futhi ngaleyo ndlela uqede kungekho kuka 1400 kcal ngosuku.
Sassy Amanzi ingenye amathuluzi amahle kakhulu kwesisindo. It kuyasiza ngokushesha sokudiliza amafutha, ukuqeda ukuvuvukala nokuvuvukala. Kodwa, njengoba kunjalo nanoma iyiphi enye isiphuzo, kufanele sikunake lokho wena udle, ukuze isisindo elahlekile akuyona indawo abasanda kuthola.
Dill. izakhiwo awusizo zamakha
Ukuze uthole ukwaziswa kokuthi ingaba kanjani ezikhathini ezinzima: ezinye awusizo
Zokuxhumana nolukhohlisayo: ubuchwepheshe, injongo, izibonelo. Psychology yokuxhumana
Menstruatsionny umjikelezo emva kokubeletha - kanjani futhi nini abuyiselwe